Warshadaha Shiinaha C02 USB C Jack Adapter adaha iyo alaabada iibiyaasha | Huachuang Elektaroonig ah
Magaca Badeecada: 2 IN 1 USB-C Madaxweyaha / Dhagta Dhagta Audio Adapter
Moodel MAYA: C02
Dekedaha: USB-C Ku USB-C + 3.5mm Jack
Dhererka Xariga: 100 mm
Miisaan: 8 g
Cabbirka: 35 * 15 * 8 mm
1, Fadlan Xusuusnow: Telefoonkaaga ama aaladda kiniinigaaga WAA INAAD taageero dhegeysato muusikada iyo isku dallacsiinta isku waqti.
2, Compatibility: Waxaa loogu talagalay badiyaa qalabka USB-C iyo 3.5mm. Oo ay ku jiraan Google Pixel 4/4 XL / 3 / 3XL, Samsung Galaxy S10 / S9, Xusuusin 10, iPad Pro 11 / 12.9 2018 & 2020.
3, Dacwad qaadid: Si aad u dallacdo qalabkaaga inuu kuxiro USB-C Digital-ga Ada Ada Audio adoo ku dallacaya USB-C USB ku dhex xero xarkaha darbiga USB-C.
4, Hi-Fi Music Muusig: Lagu dhisay-digital-to-analog converter (DAC) wuxuu soosaaraa muusig tayo sare leh oo Hi-Fi ah oo la jaan qaadi kara adeegyada qulqulka joogtada ah sida Tidal iyo Spotify Premium. Cod maqal-sareeya (24-bit / 96 kHz) oo leh cod-weyne Class G.
5, Qalabka korantada dibedda ah ma loo habeyn karaa gadaal dambe ee fiyuuska, si taxaddar leh u habeyn kara oo habeyn kara khadadka, ma ahan mid qalalan, laakiin sidoo kale maaraynta iyo adeegsiga qalabka dibadda;
6, wuxuu si wax ku ool ah u wanaajin karaa salka hoose ee awoodda kala-baxa kuleylka buugga, kor u qaadidda wareegga hawada, uma wareejin doono kuleylka xad-dhaafka ah desktop-ka, sidaas darteed yareynta adeegsiga raaxada, isla waqtigaas, waxay si wanaagsan u ilaalin kartaa qaybaha gudaha ee buugga xusuus-qorka. kululaynta oo sababi dhaawac;
7. Waxaad noqon doontaa mid wax soo saar badan. Xafiiska, ku xir fiilada korontada, fiilada korantada, fiilada daabacaadda, jiirka, iwm. Meesha ay ku taal kombiyuutarka deerada ama goobta wax ku xirmayaan, oo mashiinka saar meesha aad ku shaqeyneyso, markaad baxeyso, furaha ayaa mashiinka kala saari kara kombuyuutar dekada. iyo rugta qufulka, taas oo aad ugu habboon
Hore: 2-in-1 USB-C Madaxweyaha Dhabarka Mashiinka ee Dallaca leh, USB-C illaa 3.5mm Ada Ada Audio
Xiga: 5 IN 1 USB-C Adapter oo leh HDMII, 100 W PD, VGA, USB3.0,3.5mm Jack
Nooca C Si loo isticmaalo adaariyaha dhagaha
USB C ilaa 3.5mm Adapter
USB C Si aad u garaacdo Jack
Adap-ka USB-C adap-ka
2-in-1 USB-C madaxweyaha mashiinka mashiinka mashiinka ee Chargi ...